Rockin 'အကြောင်းအရာသည် ပိုမို၍ ပြောင်းလဲမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Tech Blog
Conversions, အကြောင်းအရာနှင့်ရော့ခ် Opera
အင်္ဂါနေ့, မတ်လ 8, 2011 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 ခရစ် Bross
Who's Rock Opera Tommy သည် website ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်? အရာအားလုံးပဲ!
ဒဏ္legာရီဆန်သောရော့ခ်အုပ်စုသည် Rock & Roll ကိုသူတို့၏ Landmark Rock Opera Tommy (1969) နှင့်အတူအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ပြောင်းလဲမှုနှုန်း (၂၀၁၁) ကိုပြောင်းလဲလိုပါသလား။
ငါ့လိုအပ်ချက်ကိုမျှော်လင့် သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ရောက်သောအခါသင့်ရှေ့မှာကျွန်ုပ်တင်ထားသည့်အရာများသာရှိသောကြောင့်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်မမြင်နိုင်၊ မထိနိုင်ပါ
သင်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့သွေးဆောင်ခံရပေမယ့်ငါဂရုစိုက်တာအားလုံးဟာစျေးနှုန်းဖြစ်တယ်လို့မယူဆပါနဲ့။ အချက်၌ဖြစ်ရပ်မှန် (လေ့လာမှု)
ပစ္စည်းငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီသည်စျေးနှုန်းအပေါ်ယှဉ်ပြိုင်ရန်ကြိုးစားသည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အမျိုးအစားထဲမှာစျေးအကြီးဆုံးအကြားရှိပါတယ်။ သူတို့ထံမှ ၀ ယ်သူများအတွက်အဘယ်အရာသည်အရေးအကြီးဆုံးနည်း။ လွယ်ကူခြင်းနှင့်ရရှိနိုင်ခြင်း!
ဤကုမ္ပဏီတွင်မြောက်အမေရိကတွင်တည်ရှိသည့်နေရာနှစ်ဒါဇင် + ရှိပြီးသူတို့၏စျေးကြီးသောပစ္စည်းကိရိယာများမှာအမြဲတမ်းရှိနေသည်။ ဘာလို့ထင်လဲ? သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုမပြောကြဘူး
စျေးကြီးတာကြောင့်ငါဟာနောက်ထပ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအနည်းငယ်လိုအပ်တယ်။ ငါဝယ်ရန်ကတိကဝတ်မပြုမီတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူစကားပြောလို။ ဖုန်းနံပါတ်? ထို site ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် PPC ကြော်ငြာ extension များတွင်မပါဝင်ပါ။ အိုး!
ငါ့ကိုသင်၏ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းရန်ပုံများကိုသာအားမကိုးပါနှင့်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီအတွက်အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာဖန်တီးပါ။ ငါ့ကိုပညာပေး၊ ဖျော်ဖြေပါ၊
ရှိ ကြယ်အကြောင်းအရာ အားလုံးအတွက် သင်ကြည့်လိုက်သောကုန်ပစ္စည်းစာမျက်နှာဘယ်နှစ်လုံးတွင် content သုညရှိသနည်း။ အဘယ်သူမျှမအကြောင်းအရာမရှိအခြေအနေတွင်နှင့်မျှမရောင်းအား။
နမ်း (မိုက်မဲသောကြောင့်ထားပါ) ငါ့ကို
Be ခိုင်မာသော။ အသံတစ်ခုတည်းဖြင့်ပြောပါ သက်ဆိုင်သူများစွာမှလာသည့်ရောနှောနေသောစာတိုပို့ခြင်းဖြင့် amok ကိုမ run ပါနှင့်။
ငါ့ကိုနှင့်အတူဆွဲပါ တက်ကြွသောအသံ။ အကျိုးကျေးဇူးများကိုခိုင်မာသောနည်းလမ်းဖြင့် ဦး ဆောင်လမ်းပြသည်ဥပမာ -“ ရက်ပေါင်း ၅၀ အတွင်း ROI ၅၀% တိုးသည်။
အဘယ်သူမျှမဖောင်းပွ, ကျေးဇူးပြု။ ငါ့ကျောကိုမကျွတ်စေနဲ့မိုးရွာနေပြီလို့မပြောပါနဲ့ သင်၏ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှင်းပြပါ၊ အကျိုးရှိပါကရှင်းပြပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုသင်ရောင်းရန်လိုအပ်သည်မှာ mole hill ဖြစ်သည့်အခါတောင်တက်ရန်ကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှမတောင်းဆိုပါနှင့်။ မှားယွင်းစွာတင်ပြခြင်း = လွဲချော်သောရောင်းအား!
စည်းဝေးကြီးကိုလက်ခံပါ။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်“ တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုပေါင်းမှု” အပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည် each ည့်သည်တစ် ဦး စီ၏ဝက်ဘ်တစ်လျှောက်အတွေ့အကြုံ ၁၀၀ သို့မဟုတ် ၁၀၀၀ ကိုအခြေခံသည်။ ကွဲပြားခြားနားမှုဆိုတာကျွန်တော့်ကိုမထိဖို့ပါ။
စာလုံးပေါင်း ... က ... ထွက်: သင်ဘယ်လိုငါ့အပြproblemနာကိုဖြေရှင်းသို့မဟုတ်ငါ့လိုအပ်ချက်ကျေနပ်အောင်သလဲ?
ဒါကရိုးရိုးလေးဖြစ်သင့်သလား။ မဟုတ်ဘူး။ ထပ်မံ၍ သင်လိုအပ်ချက်များကိုမဖြည့်ဆည်းသောသင်မည်သည့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများကိုလည်ပတ်ခဲ့သနည်း။ ငါလိုချင်တာကိုရှာဖို့ဘယ်လောက်များများအခက်တွေ့စေလဲ။
ရှင်းပြပါရစေ၊ အချိန်မရှိဘူး၊ ပေါင်းကြပါစို့၊
သင်၏ထုတ်ကုန် / ၀ န်ဆောင်မှုအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြသပါ
ငါ၏အလိုဆန္ဒ / လိုအပ်ချက်အတွက်အဖြေဖြစ်လိမ့်မည်
အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးပါ။ သင်၏ at ည့်သည်များကို“ သင်၏ခြေရင်း၌စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရှာ” ရန်သင့်အားရရှိမည်။
မတ်လ 9, 2011 မှာ 4: 05 pm တွင်